सिआइबीका १० चर्चित अप्रेसन	By नवीन सन्देश on	११ भाद्र २०७३, शनिबार ०९:३९
३. ११ अर्बको अप्रेसन भ्वाइस फक्स गत ३० साउनमा सिआइबीले एकपटक राजधानीका तीन स्थानमा छापा हानी कल बाइपासको काम गरेको आरोपमा दुई युवकलाई पक्राउ गर्‍यो । काभ्रेका केदार अछामी र सिन्धुपाल्चोकका सुमन श्रेष्ठलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो । केही वर्षअघि प्रहरीले हरेक हप्ताजसो कल बाइपास सञ्चालक पक्राउ गथ्र्याे । तर, यसपटक लामो समयको ग्यापपछि कल बाइपास गर्नेहरू पक्राउ परेका हुन् ।
५. गुन्डा नाइकेको करोडौँ सम्पत्ति कुनै समयमा डान्सबारमा बाउन्सरका रूपमा काम गर्ने गुन्डाहरू पछिल्लो समय करोडपति भइसकेका छन् । महँगा गाडी र ठूला महलमा उनीहरू बस्ने गरेका छन् । पैसाकै बलमा हरेक क्षेत्रमा उनीहरूको राजनीतिक पहुँच बनिसकेको छ ।
६ . न्यायाधीश बम हत्याको रहस्य सर्वाेच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या नेपाल प्रहरीका लागि ठूलो चुनौती थियो । लामो समयसम्म पनि उक्त घटनाको अनुसन्धानमा असफल हुँदा प्रहरीको छविमा दाग लागेको थियो ।
९. अप्रेसन हन्टको लहर राज्यमा कानुनी राज्यको स्थापनामा सिआइबीको अर्काे योगदान हो– अप्रेसन हन्ट । अदालतले दोषी ठहर गरेर पनि फरार रहेका अपराधी समाजमा खुलम्खुल्ला हिँड्दै आएका थिए । जसले कानुनी शासनलाई नै चुनौती दिएको थियो ।